Go'aano 13-qodob ah oo laga gaaray sicir-bararka ragaadiyey Puntland + Video - Caasimada Online
Home Warar Go’aano 13-qodob ah oo laga gaaray sicir-bararka ragaadiyey Puntland + Video
Go’aano 13-qodob ah oo laga gaaray sicir-bararka ragaadiyey Puntland + Video
Garowe (Caasimada Online) – Guddigii uu dhawaan madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland u xil-saartay ka soo tala-bixinta arrimaha sicir-bararka ka jira deegaanada Puntland, ayaa maanta soo saaray go’aanno lagu xallinayo sicir-bararka dhashay qiima dhaca iyo diidmada lacagta Shilin Soomaaliga ah.
Guddiga oo soo saaray war-saxaafadeed ka kooban 13-qodob, ayaa soo jeediyay in maamulku mushaharka shaqaalaha 20% ku bixiso Shilin Soomaali, isla markaana dekedda 20% lagu canshuuro Shilin, si loo xakameeyo sicir-bararka la degay Puntland.
“Guddigu wuxuu kale oo daraaseeyey dhaqaalaha guud ee Puntland isaga oo qiimeeyey lacagta qalaad ee Doolarka ah (USD) ee Puntland soo gashay labadii sano ee la soo dhaafay (2019 iyo 2020) iyo inta ka baxday. Waxay kale oo ay si qoto dheer uga baaraandegeen saamaynta uu COVID-19 ku yeeshay dhaqaalaha, sida lacagihii lasoo diri prey (Rernittances). mashaariicda laga helo caalamka iyo weliba lacagaha laga helo wax-dhoofka (Export). Sidoo kale Guddigu waxuu baaris ku sameeyey inta ay la’eg tahay tirada lacagta Sh.So. ah ee Puntland cidda isticmaasha iyo wax yeelooyin kale oo dhibaatadda ka qeyb qaatey,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.
Qoraalka ka soo baxay guddiga ayaa intaas ku sii daray, “Dharnmaan baaritaanadaas iyo daraasadahaasi waxay Guddiga u muujiyeen inay kala doortaan labo qorshe ama arrirnood oo lagu wajihi karo xalinta dhibaatada suuqa lacagaha, kuwaas oo kala ah, 1 –In logo guuro isticmaalka Shillinka oo Doolar (USD) keliya la adeegsado (Full dollarization option) 2 –In Shillinka iyo Dollarku ay suuqa si xor ah l ckegsado (Hybrid option).”
Go’aanka Guddiga Waxaa la’isku raacay go’aan ah in la socodsiiyo Sh. So., lana soo celiyo kalsoonidii lagu qabay isticmaalka Shilinka, si loo xasiliyo sicirka sarifka Sh.So. Go’aanada Guddiga ee soo celinta kalsoonidda. xasilinta sicirka Shilinka iyo fulinta kuwaasi oo ay iska kaashan doonan Dowladda, Ganacsatadda iyo Qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland. ayaa waxay kala yihiin sidan hoos ku qoran:
Waxaa la xaqiijiyey in lacagta Sh.So ee suuqyadda Puntland ku wareegta , ku badan tahay sidaas darteed waxaa la go’aamiyey in Bankiga lagu xareeyo lacagta ku badan suuqyadda. Lacagaha Sh.So ee culeyska ku ah suuqa, waxaa xareyntoodda iska kaashanaya Dowladda iyo Ganacsatadda, iyadoo lacagahaas la dhigayo Bankiga Dowladda si gaaro xal waara. marka suuqu xasilona waxaa lacagta ganacsataddu loogu fasaxayaa si tartiib tartiib ah. Shaqadaas oo noqon doonta mid iskaashi, oo ah ‘XasIlInta Suuqa’.
Waxaa la isla gartey in lacagta sou, laga xareynayo , Dowladdu xareyso kala bar lacagta culeyska keentay. barks kalena ganacsatadu xerayso. Faahfaahinta qaabka loo qaybinaayo, sida loo xareynayo lacagta Sh.So wuxuu ku cad yahay Itfaaqa (Eeg lifaaqa 1d).
Waxaa la’isla gartey in Dowladda iyo Ganacsatadda ay socodsiiyaan isticmaalka Shillinka iyagoo ka wadda shaqeen,a xasilinta dhibaatadda suuqa lacagaha Puntland.
Waxaa la qaatey go’aan ah in Dowladdu cashuurta Dekedda ay ku qaado lacag dhan boqolkiiba labaatan (20%) Sh.So. ,rioc) ,fler nlushahaarka iyo kharashaadka kale ee Dowladda ay ku bixiso boqolkiiba labaatan (20%) Sh.So.
Sidoo kale, waa in ganacsataddu socodsiiso isticrnaalka shilinka, iyagoo dhiganaya lacagta Sh.So Bankiga Dowladda si ay u helaan meelo ay ku kaysadaan. isla markaana ay si fudud ula kala wareegaan iyagoo isticmaalaya Akoonadda ay ku leeyihiin Bankiga Dowladda.
Waxaa qeyb ka noqdey in Sh.So qiimihiisu hoos u dhaco isticmaalka labo sicir sarif, waxaa meesha laga saarey in ay kala duwanadaan sicirka sarifka Dowladda iyo sicirka suuqa xorta ah, taas oo macnaheedu yahay in sicirka sarifka lagu jaang.yo suuqa xorta ah. Bankiga Dowladda ayaa rnaalin walba la socon doona suuqa lacagaha soona saaraya qiimaha suuqa ee maalinlaha ah, Ishana ku haynaya hub dhaqanka sariflayaasha iyo ganacsatadda kale ee suuqa saameynta ku leh kuna kaca ficiladda sharci daradda ah.
Waxaa la joojiyey lacagta Sh.So. ah ee ganacsataddu u kala safriso goboladda Puntland, ganacsatadda waxaa lagu wargelinayaa inney quIqulka lacagta Sh.So dhexmariyaan Akoonadoodda Bankiga Dowladda Puntland. Tusaale ahaan, ganacsadihii lacag kasoo raraya Galkacayo una qaadaya Bosaso, wuxuu lacagta dhiganayaa xarunta Bankiga Dowladde Galkacayo, wuxuuna kala baxayaa xarunta Bankiga Dowladda Bosaso. 8. Waa in Dowladaha Hoose ay cashuuraha ku qaadan lacagta Sh.So. par ahaan cashuuraha dejinta gaadiidka, horumarint degmooyinka iyo nooc kasta oo ah cashuuraha maalinlaha ah ee laga qaado suuqyadda magaalooyinka Puntland.
lyaddoo ay waa jib ku tahay cidkasta oo Puntland ka shaqeysata socodsiinta iyo qaadashadda lacagta Sh.So, waxaa shirkadaha ka ganacsadda adeegga dadweynaha (Public Services) side korontadda, biyaha iyo isgaarsiinta la farayaa inney fuliyaan adeegsiga lacagta Sh.So.
Waa in dowladdu baarto, illaaliso. dabogalna ku sarneyso suurto galnimadda lacago cusub oo horey loo keydsadey, lacago xuduudaha kasoo gala iyo daabacaado cusub oo Sh.So. 11. Safirlayaashu waa inay Bankiga Dawladda ka qaataan ruqsad sarifle, isla markaasna racaan xeerarka iyo nadaarnka Bankiga Dawladda .
lyadoo la xushmaynaaho sharciga suuqa xorta ah, Shirkadalid kgaarminta ee hnoya adeega lacagaha danabaysan ka (MMT), waxaa loo fasaxay adeegii ay bixin jireen ee horey looga xajiray.
Go’aarnadda lagu furdaaminaayo dhibaatada dhaqaale ee Puntland soo wajandey oo ah in nimaadkii suuqyada kala socon waayey, dadkii danyarta ahaan dhibaato ku keenay ciddii Tulin weyda ama carcialaysa waxaay la kulmaysa ciqaab.
Gebo-gebo: Gudigu wuxuu ku qanacsan yahay haddii go.aamacia kor ku xusan cidwalba qaybta ay ku leedahay ka fuliso inay dhaqso u xalismayaan dhibaatada suuqyada ka taagan.